Lionel Messi Oo Sheegay Dhibaatada Ugu Badan Ee Heer Kooxeed Ku Qaba Chelsea -
HomeciyaarahaLionel Messi Oo Sheegay Dhibaatada Ugu Badan Ee Heer Kooxeed Ku Qaba Chelsea
Lionel Messi Oo Sheegay Dhibaatada Ugu Badan Ee Heer Kooxeed Ku Qaba Chelsea
February 20, 2018 F.G ciyaaraha 0
Laacibka xulka qaranka Argentina iyo kooxda Barcelona Lionel Messi, ayaa heli doona laba kulan oo fursad ah oo uu ku jabin karo rikoorka goolal la’aanta ee ka heysata kooxda ku ciyaarta Staform Brdige.
Chelsea ayaa habeyn danbe garoonkeeda ku soo dhaweyn doonta kooxda reer Spain ee Barcelona kulanka lugta koowaad ee wareega 16-ka Champions League ka hor inta aysan u safrin magaalada Barcelona ciyaarta lugta labaad.
Weeraryahanka Barcelona Lionel wuxuu xirfadiisa ciyaareed inta uu ku guda jiray uu wajahay 82 kooxood, wuxuu ku ku hungoobay in gool ka dhaliyo 12 koox oo kooxahaasi kamid ah Chelsea, Liverpool Inter Milan, Benfica iyo Rubin Kazan ayaa qeyb ka ah kooxaha shaabaqooda ka ilaaliyay Messi.
Si kastaba ha’ahaatee Baahida ugu dheer ee dhanka gool la’anta ah waxay Messi ka heysataa Chelsea, isagoo kooxdaasi ka hor yimid 8 kulan wuxuu shabaqooda ku tuuray 29 laad laakiin midna lama uusan helin shabaqa kooxda ka dhisan galbeedka London.
Messi xili ciyaareedkii 2011/2012 waxa uu u ahaa mid cajiib ah maadaama uu dhaliyay 73 gool dhamaan tartmada, xidigaasi ayaa isla fasal ciyaareedkii laba kulan ka hor yimid Chelsea laakiin uma aysan suurta galin in uu gool ka dhaliyo.
Hogaamiyaha Argentina ayaa xili ciyaareedkan hogaaminaya gool dhalinta horyaalka Laliga ee dalka Spain, waxaana uu isku cel celis Messi uu ku lug yeeshay inta badan goolasha Barcelona ay dhalisay dhamaan tartamada.
Metro oo warbixintan maanta bogeeda hore ku daabacday ayaa qoraalkeeda ku soo gaba gabeesay in Barcelona inta badan aysan guuleysan marka uu Messi ku guuldareyso in uu shabaqa soo taabto.